Iran:”Fifohazan’ny Islamika” Sa Fandresen’ny OTAN Ao Libya. · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Septambra 2011 5:40 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Shqip, Español, Italiano, বাংলা, polski, Ελληνικά, Svenska, 简体中文, 繁體中文, English
Rehefa nantsoin'ireo olo-manan-kaja sy diplaomaty Iraniana sasantsasany hoe ¨Fifohazan'ny Islamika¨, ny Revolisionan'i Libya, dia namoaka sary iray ny bilaogera Iraniana Bedone Onvana izay nahitàna tsy mpankasitraka an'i Qaddafi iray eo am-panorohana ny sainam-pirenena Amerikana, miaraka amin'ny teny fanesoana: ¨Fifohazan'ny Islamika!¨.
Manoratra i Andishe[fa]:
Tsy mbola mazava tsara ihany ho an'ny mponina Libyanana ho tsara na tsia ny fanohanan'ny OTAN ny fanonganana ny fitondran'i Qaddafi. Kanefa mazava izany, fa raha tsy eo ny fanampian'ny OTAN dia tsy ho tanteraka mihitsy ny fanonganana ilay Libiana mpanao didy jadona. Raha ny hevitro manokana, ny mpanao didy jadona izay mamono ireo mpiray tanindrazana aminy sady tsy manisy olana ny fanaovana heloka bevava mahatsiravina, dia tsy mba hihetsika raha tsy miditra an-tsehatra ny be sandry.
Royal Air Force fiaramanidina Typhoon taorian'ny iraka tany Libya ny 20 Martsa 2011. Avy amin'i O.T.A.N. ao amin'ny Flickr (fampiasàna mangarahara nahazoan-dàlana).
Nametraka fanontaniana iray tamin'ireo mpamaky azy i Bamdadi hoe: ¨Iza no firenena manana isa ambony indrindra amin'ny fampivoarana ny olona ao Afrika?” Rohy iray namaly ny fanontaniana: i Libya izany! Manampy ilay bilaogera, “izay indrindra, izany dia talohan'ny nipoahan'ny ady an-trano tao amin'ny firenena.” Tao aminà lahatsoratra hafa iray, dia nilaza i Bamdadi [fa]:
Tsy azoko hoe nahoana no tokony hahafaly ny Iraniana ny fahombiazan'ny OTAN sy ireo firenena Tandrefana ny amin'ny fitondrana amin-kery antoko politika vaovao any Libya?…Angamba heverin-dry zareo fa ny [fitondrana vaovao] dia mety ho dingana iray hahatongavana any amin'ny fahafahana? Azo antoka fa mivazivazy izy ireo. Tsy nino an'izay ireo firenena nandaroka baomba an'i Libya. Fahafahana inona? Tena vendrana mihitsy ianao raha mino izany…ny fahafahana dia tokony homen-danja kely kokoa farafaharatsiny nohon'ny fidirana an-tsehatry ny tafik'ireo firenena matanjaka sy ny famotehana ireo firenena osa amin'ny alalan'ny fampiasàna fitaka.
Manoratra i Secular [fa]:
Ny fahasamihafàna eo amin'ny Iraniana sy Libyana dia ny fanohanan'ity farany ireo mpanao politika fanta-daza nandositra ny fitondran'i Qaddafi , raha tsy nanohana ny [hetsiky ny mpanohitra] Mir Hussein Mousavi ny Iraniana sasantsasany na dia tsy teo amin'ny fitondrana mahefa andritran'ny 20 taona teo ho eo aza izy. Matetika ny Iraniana no miteny fa [ireo izay eo amin'ny fahefana sy ireo mpitaky fanovàna] dia mitovy avokoa.